दीपाश्रीले स्वस्तिमासँग मित्रता बढाउनुको यस्तो रहस्य !
काठमाडौं, साउन २ । अभिनेत्री दीपाश्री निरौला पछिल्लो समय फिल्महरुको कामबाट लगभग फुर्सदमै छिन् । अर्थात् नयाँ प्रोजेक्ट नपाएपछि उनी विकल्पको खोजीमा छिन् । यस्तैमा नयाँ नायिका स्वस्तिमा खड्कासँग अचानक मित्रता बढाएकी दीपाको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा मसला बन्न थालेको छ ।
फिल्म ‘छक्कापन्जा’मा अभिनय गरेकी स्वस्तिमासँग अचानक किन नजिकिइन् त दीपा ? जबकी, उनीहरुको कामको शैली र अरु धेरै कुरा मिल्दैनन् । गस्सिप कस्तो पनि छ भने, निश्चल अर्थात् स्वस्तिमाका श्रीमान निश्चल बस्नेतसँग नयाँ प्रोजेक्ट थुप्रै छन् । केही काम त ब्यस्तताकै कारण उनले ‘रिजेक्ट’ पनि गरिदिएका छन् ।
यता टेलिसिरियलबाट बिदा भएपछि दीपा भने नयाँ फिल्मको कामका लागि भौँतारिरहेकी थिइन् । यस्तैमा स्वस्तिमासँग निकट भएरै निश्चलले फिर्ता गर्ने प्रोजेक्ट आफूले पाउने प्रयासमा लागेको फिल्मकर्मीहरुको बुझाइ छ । उनकै निकटस्थहरुले समेत पछिल्लो समय यो मित्रताको भित्री रहस्यलाई सतहमै ल्याइदिएका छन् । सार्वजनिक रुपमै दीपा र स्वस्तिमाको मित्रतालाई ब्यंग्य गर्न थालेका छन् ।